उमालेको - Thermomix रेसिपी | ThermoRecines
Verduras40 मिनेट2 व्यक्ति150२ क्यालोरी
उमालेको प्लेट जस्तो केहि छैन सब्जिहरु ताकि हाम्रो शरीर एक हप्तामा अधिकमा भरिए पछि पुनः प्राप्त हुन्छ।
यो प्लेट स्वस्थ र सरल यो भ्यालेन्सियाई ग्यास्ट्रोनमीमा एक क्लासिक हो। यो खाना खाने समयमा आधारभूत हो र यसलाई हप्तामा कम्तिमा एक पटक लिनु सामान्य कुरा हो। यो सामान्यतया सिरका र तेल संग भिज्याइन्छ।
म, जो यहाँ र त्यहाँबाट उत्तम प्राप्त गर्दैछु, पहिले नै यसलाई हाम्रो साप्ताहिक मेनूमा थपिएको छ। के म यो फोकाको सब भन्दा बढी मनपर्दछ कि यसले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ गिलास जफत चामल, उमालेको अण्डा जस्ता अन्य तयारीहरू गर्न, दाल, आदि। र मलाई त्यो मन पर्छ किनभने किनभने ऊर्जाको अतिरिक्त म पनि समय बचत गर्दछु।
उमालेको साधारण खानाको लागि हल्का डिश हो।
Medium मध्यम आलु
२ सानो गाजर वा १ ठूलो
१० सपाट गेडाहरू
हामी बीन्समा सुझावहरू र पार्श्व थ्रेडहरू हटाउँछौं। हामी त्यसलाई धोउँछौं र प्रत्येक5टुक्रामा काट्छौं। हामी टुक्राहरू भेरोमाको बीचमा राख्छौं।
हामी गाजरलाई भत्काउँछौं र अन्तहरू हटाउँछौं। हामी त्यसलाई धोउँछौं र समान आकारका टुक्राहरूमा कटौती गर्दछौं। हामी टुक्राहरू पनि केन्द्रमा राख्छौं।
हामी आलु बोक्रा धुन्छौं। हामीले त्यसलाई मध्यम टुक्राहरूमा काट्यौं जुन हामी सिमी र गाजरको टुक्राहरूको वरिपरि राख्नेछौं।
हामी प्याज छीलो र यसलाई क्वार्टरमा काट्यौं। हामी टुक्राहरू टाढा राख्छौं।
हामी गिलास पानीमा भरिन्छौं दोस्रो मार्क सम्म। १ लिटर। हामी बन्द भेरोमा स्थितिमा राख्छौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
समय पछि हामी जाँच गर्दछौं तर तरकारीहरू हाम्रो मनपर्दो छ। यदि तिनीहरू धेरै कडा छन् भने, हामी खाना पकाउन अर्को minutes मिनेटसम्म विस्तार गर्न सक्छौं।
हामी स्रोतमा फिर्ता लिन्छौं। थोरै नुन छर्क्नुहोस् र तेल र सिरका संग सेवा।
केन्द्रमा गाजर र सिमी जस्ता सबै भन्दा कडा अवयवहरू राख्नु महत्त्वपूर्ण छ ताकि तिनीहरूले भापको लागि धन्यवाद नरम पारे।
थप जानकारी - हल्का मसूर स्टू
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सलाद र तरकारीहरू, वरोमा रेसिपीहरू, भेगन
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » विशेष व्यंजनहरु » भेगन » उमालेको
मौसममा मेरी आमाले यसमा फूलगोभीका केही स्प्रिगहरू राख्छिन्, र यसको डाँठहरू पनि राखिन्छ। यो वास्तवमै एक पूर्ण डिश हो, सरल र धेरै सस्तो!
म पनि यसलाई सामान्यतया फूलगोभी राख्छु ... यसलाई माया!
यो एउटा थाल हो जुन एकदम, धेरै राम्रो, स्वस्थ छ, मेरा सबै साथीहरूले यसलाई मन पराउँछन्, किनकि जब तिनीहरू आउँछन् यो स्टीम चाहिन्छ ... र यसको स्वाद एकदम राम्रो छ ... स्वाद तुलना। र एक ग्रिल माछा वा ग्रील्ड मासु संग ... यो आदर्श र स्वादिष्ट छ ...
तपाईं बिल्कुल सही नुरिया हुनुहुन्छ।
यो अलि 'नरम' जस्तो लाग्न सक्छ किनभने यो सादा छ र यसमा कुनै सजावट छैन, तर स्वाद राम्रो छ किनभने यो साँच्चै तरकारी जस्तै स्वाद छ।
हामी यसलाई खानेको लागि लिन्छौं किनकि यो हल्का छ। कहिलेकाँही हामी यसलाई उमालेको अण्डाको साथ दिन्छौं।
धेरै राम्रो स्टीम्ड र धेरै स्वस्थ। मैले भेरोमा ट्रेमा केही ब्रोकोली गुलदस्ते थपें ​​र महान !! धेरै धेरै धन्यवाद। खैर, मैले तपाईंको रेसिपी बुक र १० खरीद गरें। तपाईं उत्कृष्ट कार्य गर्नुहुन्छ। चुम्बन
तपाइँको टिप्पणी को लागी मार्टा धन्यबाद!
हामी तपाईंलाई भान्छामा सहयोग गर्न खुशी छौं!
हल्का शतावरी क्रीम
मकारोनी र गोमांस टेक्स मेक्स